Baked Spiced Potato Wedges | မီးဖိုချောင်ချက်ပြုတ်နည်းများ
မာရီယာ vazquez | 08/05/2022 10:00 | Hot Entries
ဤအမွှေးအကြိုင်များနှင့် ဖုတ်ထားသော အာလူးသပ်သပ်သည် ပြီးပြည့်စုံသော အရာဖြစ်လာနိုင်သည်။ စနေ၊ နေ့လည်မှာ လှေကားထစ် သို့မဟုတ် လသာဆောင်တွင် နေရောင်အောက်တွင် သင်နှစ်သက်ရာ ဆော့စ်ဖြင့် လိုက်ပါသွားသည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ မှန်ပါတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က သူတို့ကို ကျွန်တော် နှစ်သက်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ထပ်ခါထပ်ခါ အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အာလူးအတုံးလေးတွေ ပြင်ဆင်ရတာ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ အာလူးတွေကို လှီးဖြတ်ပြီး ဆီထဲမှာ စိမ်ထားပါ။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အရောအနှောဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပါ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီနေ့လုပ်ဖို့ အဆိုပြုထားတဲ့အတိုင်း မုန့်ညက်နဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေနဲ့ ရောလိုက်ပါ။ Oregano၊ cumin နှင့် paprika ကို ယခုတစ်ကြိမ် ရွေးချယ်ထားသော်လည်း ဥပမာအားဖြင့် ဟင်း သို့မဟုတ် မုန်ညင်းနှင့် ပေါင်းစပ်မှုအသစ်ကို စမ်းကြည့်ချင်ပါသည်။
မင်းအလုပ်ပြီးတာနဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေက မီးဖိုကို ဂရုစိုက်မယ်။. ၃၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ထားပြီး အာလူးများကို ကျက်အောင်ပြုတ်ပြီး အညိုရောင်ဖြစ်အောင် တစ်ဝက်လှန်ပေးရပါမယ်။ ပြီးသည်နှင့် သင်သည် ၎င်းတို့အား စမ်းကြည့်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမည်မဟုတ်သော်လည်း မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ပါ သို့မဟုတ် သင်လောင်ကျွမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့် ဖုတ်ထားသော အာလူးသပ်ရပ်မှုသည် စတင်သူအဖြစ်သာမက အသားကင် သို့မဟုတ် အသီးအရွက်များပါ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဘိတ်အချိန်: 10 မီတာ
စုစုပေါင်းအချိန်: 40 မီတာ
ဆားတစ် ဦး ဖြစ်တော့
breadcrumbs ၏4ဇွန်း
1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း oregano
အာလူးကို ကောင်းကောင်းဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ကို အသားအရည်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်။
ငါတို့သည်သူတို့ကိုအခြောက်နှင့် အလျားတစ်ဝက်ဖြတ်ပါ။. ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဝက်စီကို နှစ်ပိုင်းစီဖြတ်ပြီး အခြားနှစ်ပိုင်းကို တစ်လှည့်စီ ဖြတ်ကြသည်။ စုစုပေါင်း အာလူးပေါင်း ၁၆ တုံးရှိပါမယ်။
ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းကို ကွန်တိန်နာတစ်ခုထဲမှာ ထည့်ပြီး spatula ဒါမှမဟုတ် လက်နဲ့ရောပြီး အပိုင်းအားလုံးကို သေချာအောင် ဆီနှင့်အတူကောင်းစွာ impregnated ။
ထို့နောက် breadcrumbs နှင့်နံ့သာမျိုးကိုရောနှော ပန်းကန်ပြားတစ်ခုပေါ်တွင် အာလူးများကို ဤအရောအနှောကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖုံးအုပ်ပြီးနောက် parchment စက္ကူဖြင့် စီထားသော မုန့်ဖုတ်ဗန်းပေါ်တွင် ထားလိုက်ပါ။
15ºCမှာမိနစ် 200 ဖုတ်ရမည် အာလူးများကို လှန်ပြီး အနည်းဆုံး နောက်ထပ် 10 မိနစ်ခန့် ချက်ပြုတ်ရန် သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ဘက်မှ ရွှေရောင်ပြောင်းသွားသည်အထိ ချက်ပြုတ်ပါ။
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေနဲ့ အာလူးကို ငံပြာရည်အနည်းငယ်နဲ့ မီးဖိုမှာ ချက်ကျွေးပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » အပေါင်းအဖော် » Hot Entries » ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် အာလူးကြော်
paprika အာလူးနဲ့ ကြော်ပါ။
မုန့်ညက်မပါဘဲ Keto ပေါင်မုန့်။